Iinkonzo zeinshurensi kwiiPhilippines
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Business Directory IiNtshumo
IPHAWU LAMAHHALA KWI-intanethi nganye i-peso ibala.Savela kwi-inshurensi yakho. Yiba ne-Quote EMAHLA ngomzuzu okanye nangaphantsi kwendlela yasimahla yasecaleni Uqinisekiswe ngokukhawuleza kwemigaqo yebango ukuya kwi-6 intlawulo elinganayo (ethe fithi ngenyanga) Lungisa uthatho-nxaxheba lwe-2,000 simahla ingozi ye-PA eyenzelwe bonke abathengisi kunye neebhanki zasimahla ...
umbono IiNtshumo ishicilelwe I-2 iminyaka edlulileyo
Khetha udidiindawo yokuhlala Amagumbi aqeshwayoAmakhaya okuhlala Izindlu Apartments Condos Iihotele zaseKapa unitsIqashiso lomhlaba Umhlaba wo kuhlala Umhlaba wezoLimoIimpahla zentengiso Izithuba zeofisi Indawo yemizi-mvelisoBusiness Directory Ababoneleli beenkonzo zeMali Abalawuli berhorho IiNtshumoIsiqondisi seArhente yeZindlu Abarhwebi bezindlu kunye nabarhwebi
inshorensi yindlela yokhuselo ekulahlekelweni yimali. Luhlobo lolawulo lomngcipheko olusetyenziswa ikakhulu ukubiyela umngcipheko welahleko enokubakho, yokungaqiniseki. Umbutho obonelela i-inshurensi yaziwa njenge-inshurensi, inkampani ye-inshurensi, okanye inkampani yeinshurensi. Umntu okanye iziko elithenga i-inshurensi liyaziwa njenge-insured okanye ipolisi. Intengiselwano ye-inshurensi ibandakanya ukufumana i-inshurensi uthatha into eqinisekisiweyo neyaziwayo encinci njengelahleko kwindlela yokuhlawula kumnini-inshurensi ngesithembiso sokuhlawulwa kwemali yeinshurensi kwimeko yelahleko egutyungelweyo. Ilahleko isenokungabikho okanye ingekho semalini, kodwa kufuneka ihlawulwe kwimibandela yezemali, kwaye kufuneka ibandakanye into apho i-insured inenzala enganyangeki esekwe bubunini, ubunini, okanye ubudlelwane bepension. Umgcini weinshurensi ufumana ikhontrakthi, ebizwa ngokuba ngumgaqo-nkqubo weinshurensi, ochaza imigaqo neemeko apho i-insured iya kuhlawulwa ngemali. Isixa semali esityalwa yi-inshurensi i-insured kwi-insulin yokuhlawulwa kwemali ebekiweyo kumgaqo-nkqubo we-inshurensi kuthiwa yiprimiyamu. Ukuba i-inshurensi iva ilahleko enokuthi igqunywe ngumgaqo-nkqubo we-inshurensi, i-inshurensi ingenisa ibango kum inshurensi ukuze ilungiswe ngummeli wamabango.